အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့အပေါ်ပိတ်ပင်မှုAprilပြီ ၁၇ ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည် RayHaber | raillynews
[27 / 03 / 2020] 27.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်	coronavirus
[26 / 03 / 2020] 26.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်	coronavirus
[26 / 03 / 2020] ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာသောစျေးနှုန်းများမြင့်တက်နေသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြစ်ဒဏ်များကိုဝန်ကြီး Pekcan မှကြေငြာခဲ့သည်	06 တူရကီ
[25 / 03 / 2020] 25.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်	coronavirus
[25 / 03 / 2020] 24.03.2020 Coronavirus အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ - ကုသသောလူနာအရေအတွက် ၂၆	coronavirus
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့အပေါ်ပိတ်ပင်မှုကိုAprilပြီ ၁၇ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့အပေါ်ပိတ်ပင်မှုကိုAprilပြီ ၁၇ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
15 / 03 / 2020 06 တူရကီ, 994 အဇာဘိုင်ဂျန်, 995 ဂျော်ဂျီယာ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ASIA မှ, လောက, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင် New Type Coronavirus အစီအမံ၏အတိုင်းအတာအရ ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၄ ရက် (ယနေ့) ၂၄ နာရီဒေသစံတော်ချိန်ဂျော်ဂျီယာနှင့်အပြန်အလှန်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
တူရကီ, ဂျာမဏီ, ပြင်သစ်, စပိန်, နော်ဝေ, ဒိန်းမတ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, သြစတြီးယား, ဆွီဒင်နှင့်နယ်သာလန်မတ်လ 14, 2020 မှာ 08 နေ့စွဲအတွက်ဖွဲ့စည်းသည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကနေအောက်မှာ coronavirus အစီအမံ: 00 အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာ 24, များထံမှ: 00 ဧပြီလ 17 မှစ. ဒါဟာ 2020 အထိဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့နေ့စွဲ 17 ရက်ကြာ quarantine လိုအပ်ချက်နှင့်အတူ 2020 ဒေသစံတော်ချိန်သည်အထိတူရကီဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်မတ်လ 24.00, 14, ပြည်ပမှာလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပြည်ပမှာအပန်းဖြေသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများတိုးတက်လာခဲ့သည်။
တူရကီအဇာဘိုင်ဂျန်ဂျော်ဂျီယာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးများ BTK များအတွက် Convenes
အဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာနှင့်တူရကီတို့သည်ဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းများအတွက်အခွန်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်
ကာဇက်စတန်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာမီးရထားကုမ္ပဏီများ၊ ကက်စပီယန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး…
သဘောတူညီချက်ဧပြီလ 4, 1996 ရက်စွဲပါတူရကီနှင့်ဂျော်ဂျီယာအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းအကြားလက်မှတ်ရေးထိုး ...
3 ။ ကျနော်တို့လေဆိပ်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှစိတ်အားထက်သန်နေ
အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်အတွက်ပထမဦးစွာ Scheduled ပျံသန်းမှုလူမျိုး
ကုန်သည်ကြီးများအသင်း:3။ လေဆိပ်မှာအဘယ်သူမျှမပျံသန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေး
Havalimanı`Nအစ္စတန်ဘူလ် Completed နယူးလေယာဉ်စမ်းသပ်မှု
ဘူလ်ဂေးရီးယားလေယာဉ်အချိန်မိနစ်ဖို့ NEW xnumx.havalim3Download
တူရကီနှင့်နိုင်ငံခြား Bayraklı သင်္ဘောများ၏နောက်ဆုံးဆိပ်ကမ်း 10 အချက်အလက်များအားစစ်ဆေးလိမ့်မည်
Bursaray မြို့ဆေးရုံသည် Mudanya လမ်းဖြတ်ကူးသွားသောလမ်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ကြည်းတပ်၏မတ်လ 28 1916 လိုအပ်ချက်များကို: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
27.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်
ASELSAN ၀ န်ထမ်း Coronavirus အမှုအားတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်
YHT Stations နှင့် Marmaray Stations သို့အပူကင်မရာ
Curious ကလေးများအတွက် Coronavirus လမ်းညွှန် 'သိချင်စိတ်ကကြောက်ရွံ့မှုကိုကျော်လွှား'
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ Mersin အတွက် Coronation ဆန့်ကျင်စစ်ဆေးသည်
Coronavirus အစီအမံများအရ Yenimahalle-Şentepeကြိုးကြိုးလိုင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားသည်!
Kurtalan Express သည် la လာဇစ်တွင်မြေပြိုမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သည်
TCDD Tasimacilik ထံမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအားလက်ခုပ်တီးသည်
Coronary Virus သံသယရှိသည့် Ankara-Sivas YHT ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင်လုပ်သား ၃၀၀ ခန့်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
မီးရထားအလုပ်သမားများမင်္ဂလာ၏ 27 မတ်လကမ္ဘာ့ဖလားနေ့